DHIROONKA QAJAARKA AH: QEEXITAANKA NOOCYADA UGU FIICAN - BEER CAGAARAN
Waqtigan xaadirka ah, tiro badan oo kala duwan oo kala duwan oo qajaar ah, wakiil ka mid ah qoyska bocorka, ayaa laga soo qaatay dalal kala duwan.
Xitaa ninkii beerta ka shaqeeyaa oo leh khibrado badan oo soo kordhaya dalagga dalaggu wuxuu ku dhex mari karaa khayraadkan. Maxaan ka sheegi karnaa sheekooyinka ama kuwa hadda bilaabay in ay koraan khudradan.
Oo hadday beerta nudaha ah ku noolaato degaan aad u deggan sida Ural, sababtoo ah xaaladaha cimilada, markaas qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu caawiyo.
Si loo helo kalsooni ah in shaqadiisu aysan hoos u dhicin daadin, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu bilaabi doonaa inuu wax barto si faahfaahsan oo ku saabsan sida loo beerayo qajaar ee Ural iyo noocyo kala duwan oo lagu dooranayo.
Hadalka mawduucaani wuxuu ku saabsanaa noocyada dalagga.
Kala sooc "Cupid"
Gorgortanka qaybta ah. Ripens dhakhso ah (42 - 45 maalmood). Dhirta ayaa aad u xoog badan, awood leh, nidaam xidid aad u horumarsan.
Mid ka mid ah meesada sida baadiyaha ah 6 - 8 qajaarka ayaa la sameyn karaa. Miraha waa qaabka cylindrical qaab, cagaar mugdi ah, oo leh tiro badan oo tubercles yar yar, dhamaadka kaas oo ay jiraan cadar cad cad oo yar yar.
Noocyo qajaar ah Peel "Cupid" waa mid aad u khafiif ah, iyadoo la isticmaalo inta badan aan la dareemin. Jirka oo si wadajir ah u diirlaha ma siinayo gabi ahaanba qadhaadh dhadhanka. Midhaha miraha looma dhumo muuqaalkooda soo jiidasho leh, haday qadar dhaadheer ku jiraan qorraxda, taas oo ah, ma ayan huruudin.
Sidoo kale qajaarkan waa la qaadi karaa, inta aanay ku qallajin oo ha ka sii darin.
Yields ayaa aad u sarreeya - 25 - 28 kg halkii 1 sq. Laakiin waxaa jira xaq u leeyihiin in ay daryeelaan duurka, si biyo ah iyo quudinta wakhtiga, dhalidda koraan kartaa ilaa 45 - 50 kg halkii cutub oo! Kala duwanaantu wax saameyn ah kuma yeeshaan jeexjeexyada xaadirka ah iyo kuwa hooseeya.
In aagga cimilada ee Ural, waa suurad wacan si ay u koraan geedo for beerto duurka kala duwan. Ka dib 35 - 40 maalmood, geedo ayaa la dhigi karaa.
Qorshe dhireedka: 3 geedo 1 dabaq ah. m. dhulka. Daryeelidda geedo caadi ah: waraabinta, dhar xidhashada, ka soo baxa muuqaalka kore ee caleen ama mid labaad. Kobcinta miraha dhamaadka bisha Maarso. Waqtiga beerto geedo dhulka - dhamaadka May.
Kala duwanaantu waxay u adkaysaa xaaladaha cimilada xun.
Waxaa lagula talinayaa in la fuliyo waraabinta joogtada ah, ka dhigo dhismaha bacriminta ee ciidda, ka saar caws, iyo sidoo kale kabtiisa ciidda ka dib waraabiyo.
Kala sooc "Arina"
Gorgortanka qaybta ah. Bartamaha (43 - 46 maalmood). Nooca ubaxa dumarka. Buundooyinka awoodda badan, kiciya, waxay sameeyaan tiro badan oo tallaabooyin ah.
Tirada caleemaha on caleemaha waa celcelis, caleemaha naftooda waa weyn. Hal halbow ayaa sameeyay 1 - 2 ugxan. Miraha waa cagaaran dhalaalaya, 15 - 17 cm dheer, aad u casiir leh, oo dhadhan fiican leh, qoyan.
Duufku wuxuu ku daboolaa tubercles waaweyn oo dhexda ku jira, maadadaha ayaa caddaan ah. Waxaa loo isticmaali karaa cusub ama loo soo diri karaa dib u warshadaynta.
Caarada budada, xiirta saytuunka, fayruska qajaarka ah ma saameynayaan duurka noocyo kala duwan. Hase yeeshee, xashiishada budada ah waxay wax yar ka dhufan karaan miraha, haddii aadan qaadan tallaabooyinka daaweynta.
Buundooyinka adkaysiga heerkulka cimilada daran iyo la'aanta iftiinka qorraxda, taas oo ka dhigaysa kala duwan ee noocaan ah "degan" ee beeraha Ural. Celceliska dhalidda, 5 - 6 kg mitir labajibbaaran. mitir
Waxay ku kori kartaa koriyo iyo dhulka aan la ilaalin. U baahan tahay in la bilaabo geedo. Inkasta oo, haddii aqalka dhirta lagu koriyo, kulaylka si deg deg ah ayaa loo meeleyn karaa dhulka.
Geedo daryeel oo caadi ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad diiddo geedo. Marka laga beerto duurka dhalinyarada ee lagu koriyo on 1 square. m. Waxaad u baari kartaa wax ka badan 3 geedo. Haddii aad ku korto kuwan qajaarka ah ee ciidda aan la ilaalin, ka dibna 3-4 dhir ayaa loo beeray aag halbeeg.
Waa muhiim waraabinta joogtada ah ee biyaha diirran, iyo ka dib - dabciyo ciidda. Si looga hortago duurka si ay u sii kordhiso xajinta dhirta si ay waxyeello u yeelato dalagga, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la xoqo ilma-awooda ka hor inta aaney bilaabmin. Sidoo kale inta lagu jiro muddadan, waa lagama maarmaan in la yareeyo xaddiga nitrogen ee lagu daboolay 15%, ka dib markaad bilowdo goosashada, saamiga bacriminta waa in la soo celiyaa.
Dhexdhexaadinta "Habeenkii Moscow"
Galka koollada hore ee parthenocarpic.
Miraha waxaa loo isticmaali karaa 42-45 maalmood ka dib geedo kor u kacay.
Iskudarida geedaha, iskudubarida shahaadada dhexe. In nodayaasha ay sameeyeen by 1 - 2 ugxan.
Miraha waa cagaaran cufan, qaabka cylindrical, dhererka celcelis ahaan waa 12-14 cm, miisaanka waa 80-110 g. Dusha sare waa tuberculate, maqnaashaha caddaanka ah, tirooyinka is-beddelku waa ka hooseeya celceliska.
Dhadhanka labadaba cusbo iyo saliid leh qajaarka qasacadaysan waa mid aad u fiican.
Geedkaas waxaa lagu gartaa Biyaha siman, iyo sidoo kale cadaadiska cadaadiska ah ee isbedelka xaaladaha cimilada. Awood u leh inuu si firfircoon u dhali karo xaaladaha la'aanta qoraxda. Hybrid saameyn kuma yeesho cudurrada badankood, laakiin jeexjeexyada yaryari waxay waxyeelleyn karaan dhirta iyo dalagga.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo beerista of this hybrid leh beerista ee seedling. Abuurka qaybta ah ayaa la samayn karaa badhtamaha April. Geedo u baahan yihiin in la waraabiyo, bacrimiya oo adag.
Picks sida qorshaha, taas oo ah, wajiga 1 - 2 ee bogaggaas. Kaabidda dhulka waa loo oggol yahay 35 - 40 maalmood geedo jir ah. Cufnaanta beerto waa 2 - 3 geedo ee lagu koriyo ama 3-4 - dhulka banaan.
Daryeelka waa caadi, maadaama dhirta ay yihiin kuwo aan qabyo ahayn. Waxaa lagugula talinayaa inaadan bedelin qaabka waraabka, gaar ahaan haddii heerkulka banaanka uu yahay mid sare. Quudinta joogtada ah ayaa lagama maarmaan u ah dhammaan noocyada Bacriminta. Maadaama ay duurka u yihiin caddaalad, waxaa suurtagal ah in lagu rakibo trellis iyo caleemaha la toogtay taageerooyinka.
Mulching ciid ma dhaawici duurka, laakiin faa'iido leh. Daaweynta ka hortagga iyo daaweynta leh fungicides geedaha waa qasab.
Kala bedel "Socdaal"
Hybrid, parthenkarpik. Bislaaday - miraha waa la wada baabbi'in karaa 40 - 45 maalmood ka dib biqilka.
Buundooyinku waa kuwo aad u firfircoon, laakiin ma jiraan caleemo cagaaran oo badan. Miraha size dhexdhexaad ah (10-12 cm dheer), miisaankoodu yahay 100-110 g, qaabka cylindrical. Duufku wuxuu ku daboolaa tuubooyinka yaryar, cirridka oo caddaan ah.
Jirka iyo maqaarka laftoodu waa cagaar, laakiin waxaa jira weli jilicsan jaalaha ah dusha sare. Xannuunku maaha mid dhadhan ah, ama dhadhanka dhadhanka.
Noocyada kala duwan ee noocan ahi waa kuwo degan u adkee isbedel kasta ee cimilada, kuwaas oo ah, heerkulka heerkulka iyo qoyaanka hawada ee xad dhaafka ah.
Kladosporiosis, xayrta maqaarka iyo fayruuska qajaarka ah ma saameyn karaan noocyada kala duwan. Waxsoosaarku waa wax yar ka sarreeya celceliska, taas oo ah 3.5 - 3.7 kg halkii geedka. Ku habboon raashinka foomka asalka ah, qasacadaysan ama qasacadaysan.
Waxaa lagu talinayaa in ay koraan oo ay duurka this kala duwan ee noocyada lagu koriyo. Waxa lagama maarmaan ah in lagu beero abuurka geedo ee bisha Abriil, iyo geedo ku-tallaalid bishii Maajo, marka cimilada ama waxoogaa cimilo wanaagsan la dhiso.
Waxaa muhiim ah in lagu hayo heerkulka saxda ah ee abuurka Gagaashka, haddii kale geedi socodka biqilka ayaa dib u dhici kara. Waxay si fiican u ilaalin doontaa 25 - 30 ° C ciidda.
Ka dib 30 - 35 maalmood, geedo waa la jari karaa iyadoo la raacayo qorshaha 50 x 55 cm.
Buundooyinku waa kuwo aan qabin daryeel. Qaybaha ugu muhiimsan waa waraabinta, mulching iyo dabacsan ciidda, iyo sidoo kale bacrinta. Biyaha duurka waxay u baahan yihiin biyo kulul 3 ilaa 4 maalmood. Ku quudi 10 maalmood oo kasta.
Caan ku ah wareegyada beerta iyo bannaanka. Xayawaanka horay loo beerto-pollinating, dhirta farsamo ee miraha waxay dhacaan 35 - 38 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya ee geedo.
Warshad ka mid ah nooca cirifka, tirada caleemaha lateral sameeyay waa celcelis ahaan, dhererka caleemaha waxay gaareen 1-1.3 m. Zelentsy waa qaab caadi ah silsilad joogto ah, 9-10 cm dheer, oo miisaankeedu yahay 85-90 g
Midabka jidhka iyo diirka ayaa ah cagaar qani ah, hilibka laftiisa, iyo diirka, kama qadhay qadhaadh. Dusha sare ee miro waxaa loo adeegaa tiro badan oo tubercles ah, xayawaanku wuxuu ku yaala caddaan. Buuloogyadani waxaa lagu dari karaa bangiyada waxaana lagu soo ururin karaa foosto. Fresh sidoo kale waa fiicantahay.
Dhalidda sare - 5.5-6 kg halkii 1 sq.m. Cudurada qajaarka badankoodu ma saameyn karaan noocyada kala duwan.
Ku haboon labada dhul oo furan oo xiran. Bilaabidda sii kordhaya waxay u baahan tahay miisaanka rassadnym. Xaaladaha geedo mustaqbalka waa caadi. Beeridda ayaa la samayn karaa horraantii Abriil. Qoto dheer ee abuurka waa inay ahaataa 1.5 - 2 cm Cufnaanta beerashada kama badna 3 geed oo ah 1 sq.
Daadinta duurka waxay noqon kartaa bilowga - bartamaha May. Haddii dhulku dhulka la dhigo, iyo cimiladu way ka sii dari kartaa, ka dibna duurka dhalinyarada way ka fiican yihiin in ay daboolaan mudo ah.
In daryeelka ee aan qabyo ahayn. Waxay noqon doontaa ku filan in ay si joogto ah u biyo u daadiso biyaha heerkulka qolka, dabciyo carrada oo qabta quudin dheeraad ah. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid dhammaan waxyaabaha kiimikada lagama maarmaanka ah, iyo waliba dabiiciga. Waa muhiim in tallaabo laga qaado cudurada fangaska iyo cudurada viral waqti, xitaa sida ka hortagga.
Fasalka "Far East 27"
Noocyada kala duwan ee shinni-pollinating. Miraha waxaa loo isticmaali karaa 40 - 55 maalmood ka dib caleemaha kowaad.
Buundooyinka way faafayaan, dhererka caleemaha waa weyn. Waxaa la oran karaa in kala duwanaanshahan uu yahay mid aan caddayn. Waxaa jira caleemo yaryar oo ka mid ah dhirta, sidaas darteed miraha waxay helayaan qorraxda ku filan.
Qajaarka naftoodu waa mudo dheer (ilaa 15 cm), miisaankoodu yahay 100-200 g, waxay u egtahay qaab elongated qaab ah, iyo waa weyn ee size. Diirka waa cagaar leh jilicsan jaale ah, waxaa ku jira dermin yar oo wax miro ah.
Dhadhanka qajaar cusub ama qajaar la qallajiyey waa mid aad u fiican. Kala duwanaantan ayaa ka duwan heer aad u sareeya oo iska caabin ah oo ku yimaada xagta oo bararsan. Sidoo kale, duurka ee qajaarka si fiican u dulqaadan la'aanta qoyaanka, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in ay ku beeri dhirta on dhulka kor u kacay.
Caleemaha duurka waa kuwo yar, sidaas darteed geedi socodka goosashada waa la fududeeyay. Wax-soo-saarka - 1 - 3 kg halkii qaybood ee sariirta.
Buuga qoraalka ah ee geedo loo samayn karo laga bilaabo badhtamaha April. Qodobka qashinka abuurka - 2-3 cm Daraasadaha waa in marar badan la waraabiyaa oo la quudiyo si ay u xoog badan yihiin ka hor inta aan laga beerin ciidda Ural. Sidoo kale waa suurad wacan si loo dabiiciyo geedo. Gaar ah ayaa loo baahan yahay.
Qaadida dhulku waa inay dhacaan marka uusan barafku lahayn habeenkii. Cufnaanta beerto waa inay ahaataa 2 - 3 geedo halkii wareeg ah. mitir Waxaad ku kori kartaa labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan.
Kala duwanaanshaha laftiisa waa mid aan qabyo ahayn. Sidaa darteed, waxay awood u yeelan doontaa in ay u adkaysato isbeddelka heerkulka habeenkii, iyo sidoo kale guuldarooyin habka waraabka.
Tirada waraabinta toddobaadlaha ah waa inay gaaraan 3 - 4, gaar ahaan xaaladaha heerkulka sare. Quudinta loo baahan yahay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa habka trellis si ay u koraan ku xoortay kuwan, sida dhirta aan caddayn.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo nooca qajaarka cagaaran ee parthenocarpic.
Hybrid - Parthenkarpik hore Bisaylkiisa (40 - 45 maalmood). Ujeedada noocani waa mid guud. Waxaad ku noolaan kartaa ciidda.
Dhirta ayaa xoog leh, tirada caleemaha on caleemaha waa weyn, caleemaha naftooda waa weyn. Hal dhuun waxay ka kooban tahay 1 - 2 ugxan. Zelentsy waa celcelis ahaan, 11-12 cm dheer, miisaanku wuxuu gaaraa 110-120 g, qaabka cylindrical, oo leh tiro badan oo tubercles, pubescence cad.
Diirka ayaa ah mid cagaaran dhalaalaya, waxaa jira dhar cad oo badan, waxaa sidoo kale jira jilicsanaan huruud ah oo dhexda u dhexeeya midhaha. Saxarka ee qajaar ah ee midabka caadiga ah, casiir leh, crackling, aad u macaan, leedahay ur wanaagsan.
Miraha kala duwan ee "Miranda" ayaa loo isticmaalaa soo saaridda saladhyada, taas oo qajaarku ku daraan dhadhan iyo ur wanaagsan. Sidoo kale, aqallada lagu koriyo waxay ku habboon yihiin ilaalinta iyo qaadashada.
Midkoodna isbeddel xooggan oo heerkulka, ama xayrta udubdhexaadka ah ee la wadaaga cudurrada kale waxay sababi karaan waxyeelo u geysanaya duurka iyo miraha noocyada kala duwan.
Mid-April ayaa noqon doona waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo geedo. Transplantation galay dhulka waxaa la samayn karaa laga bilaabo dhammaadka May, laakiin geedo lagu beeray karaa in lagu koriyo kululey xitaa hore. Waxaad awoodi kartaa oo keliya inaad gooyso geedo kuwaas oo gaadhay da'da 30 maalmood.
Ciidda loogu talagalay miraha waa in si fiican loo kululeeyo, haddii kale ma ayan Gaga. Iyadoo habka trellis ah ee baadiyaha sii kordhaya halkii 1 square. m. Waxaad baari kartaa 2 - 3 baadiyaha, iyo haddii aysan jirin wax taageero, 3 - 4 baadiyaha. Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto bacriminta ciidda kahor, sidaas darteed si loo bacrimiyo xilliga dayrtaQajaar Ural.
Ku waraabinta duurka waa inay ahaataa ugu yaraan 2 - 3 maalmood, iyo biyo heerkulka qolka. Qiyaasta biyaha iyo biyaha waxay ku xiran tahay inta jeer ee roobabka dabiiciga ah. Waxaa muhiim ah in si joogto ah u bacrimiya ciidda, iyo sidoo kale si loo dabciyo mulch. Haddii dhirta ma midho dhalin wakhti dheer, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad isku xoqdo caleemaha.
Sidaa darteed, beerashada qajaarka ee Ural waa nooc kasta oo shaqo adag oo adag, sababtoo ah, sida aad arki karto, waxaa jira noocyo badan oo dalagga ah kuwaas oo aan ka baqin xaaladaha dabiiciga ah ee gobolka this.